l ပြပါ - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom »ပြပါ။ l
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဖိုင်များသည်သင်၏ PC ပေါ်တွင်စုပုံလာပြီးသိုလှောင်မှုနေရာကိုပြည့်နှက်နေသည်။ သို့သော် Windows 10 သည်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားနေသောဖိုလ်ဒါများ၏နေရာကိုသိရန်သင့်အားကိရိယာများကိုပေးသည်။
သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ hard drive - သို့မဟုတ် SSD - သည်၎င်းကိုအနှေးနှင့်အမြန်ဖြစ်ပျက်လာလိမ့်မည်။ အသုံးမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ခေတ်မမီသောကြီးမားသောဖိုင်များကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်နေရာလွတ်ပေးရန်အချိန်တန်ပြီ။ သင့်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်မရေမတွက်နိုင်သောဖိုင်တွဲများကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်ဆိုလျှင် ... အမြဲတမ်းမလွယ်ကူပါ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Windows 10 သည်သင့်အလုပ်အတွက်သင့်အားကူညီရန်ကိရိယာများစွာကိုပေးသည်။
ထို့ကြောင့်မေလ 2017 ၏နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်သော 1703 ကိုတံဆိပ်ခတ်ပြီး Creator Update ဟုခေါ်သည့်အချိန်ကတည်းကသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားသည့်အကြီးမားဆုံးဖိုင်များဖြစ်သောအနည်းငယ်သောသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်အတွက်ကလစ်အနည်းငယ်မှကြည့်နိုင်သည်။ ဒီဟာကဘယ်လိုလဲ
ယင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ menu က Start Windows ၏, ပြီးတော့ပေါ်တွင်ဂီယာအိုင်ကွန် ၏ပြတင်းပေါက်ဖော်ပြရန် setting များကို.
၏ပြတင်းပေါက်၌ setting များကိုခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ပါ စံနစ်.
ဒီ subtopic ကိုညာဘက်မှာပြသထားတယ်။ သင့်တွင်စာဖတ်သူအမြောက်အများရှိပါကသင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုသည့်စာကိုနှိပ်ပါ။
အဓိက drive ၏အမည်အောက်တွင်စာရင်းသည်အရွယ်အစားအကြီးဆုံးပစ္စည်းများကိုဖော်ပြသည်။
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ အခြား အဓိကအမျိုးအစားများနှင့်မကိုက်ညီသောဖိုင်တွဲကြီးများကိုပြသရန်။
စာမကျြနှာ အခြား သင်၏ကစားသမားတွင်နေရာအများဆုံးယူသောဖိုလ်ဒါစာရင်းဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်။
ယင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဖိုင်တွဲတစ်ခု၏အမည် အဲဒါကို Windows Explorer ထဲမှာဖွင့်ပြီးမလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့။
သတိထားပါ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ်တွင်အရာရာကိုလျင်မြန်စွာမဖျက်ပါစေနှင့်။ အရေးကြီးသည့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖိုင်များကိုပြင်ပ drive (သိုမဟုတ်မိုးတိမ်) တွင်အရန်သင့်သိမ်းဆည်းပါ။ အသုံးဝင်သောစနစ်ဖိုင်များကိုမဖျက်ရန်။ Windows သို့ ...
ဦးတည်ချက်က de Jean-François PillouCommentCaMarche ကိုတည်ထောင်သူ။
Bill Gates အတွက်မူသမိုင်း၏ဤသေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များက Android သည် Windows Phone ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟုရှင်းပြသည်
LIVE Transfer Talk: ဘာစီလိုနာနှင့်ဂျူးသည်ဝီလီယန်အားအခမဲ့လိုချင်သည်
Alioune Coulibaly, BMS-SA ၏စီအီးအို